Nampianatra ny zanany lahy ny fiteny sy ny faminanian’ny razany i Benjamina Mpanjaka—Voatahiry ny fivavahany sy ny ribany noho ny rakitsoratra notanana tamin’ny takelaka samihafa—Nofidiana ho mpanjaka i Môzià ary natolotra azy ny fitanana ny rakitsoratra sy ny zavatra hafa. Tokony ho 130–124 taona talohan’i Kristy.
Nandaha-teny tamin’ny olony i Benjamina Mpanjaka—Nampahatsiahy ny rariny sy ny hitsiny ary ny fiainam-panahy tamin’ny fitondrany izy—Notolorany hevitra izy hanompo ny Mpanjakany any an-danitra—Ireo izay nikomy tamin’ Andriamanitra dia hiaritra fitaintainana toy ny afo tsy mety maty. Tokony ho 124 taona talohan’i Kristy.
Nanohy ny lahateniny i Benjamina Mpanjaka—Hanompo ny olona ao amin’ny tabernakely tanimanga ny Tompo Tsitoha—Hivoaka ny mason-koditra rehetra ny ra rehefa hanonitra ny fahotan’izao tontolo izao Izy—Ny Azy no hany anarana izay iavian’ny famonjena—Afaka nanaisotra ny maha-nofo azy ny olona ary nanjary Olomasina tamin’ny alalan’ny sorompanavotana—Ho toy ny farihy afo sy solifara ny fijalian’ny olon-dratsy. Tokony ho 124 taona talohan’i Kristy.
Nanohy ny lahateniny i Benjamina Mpanjaka—Ny nahatongavan’ny Famonjena noho ny sorompanavotana—Minoa an’ Andriamanitra mba hovonjena—Tano ny famelana ny fahotanareo amin’ny alalan’ny fahatokiana—Izarao amin’ny fanananareo ny mahantra—Ataovy amim-pahendrena sy amim-pilaminana ny zava-drehetra. Tokony ho 124 taona talohan’i Kristy.
Nirakitra ny anaran’ny olona i Benjamina Mpanjaka ary nanendry mpisorona hampianatra azy—Nanjaka toy ny mpanjaka marina i Môzià. Tokony ho 124–121 taona talohan’i Kristy.
Nahita ny tanin’i Lehia-Nefia, izay Limia no mpanjakany, i Amôna—Nandevozin’ny Lamanita ny vahoakan’i Limia—Nitanisa ny tantarany i Limia—Nanambara ny mpaminany iray (i Abinadia) fa i Kristy no Andriamanitra sy Rain’ny zava-drehetra—Ireo izay namafy fahalotoana no hijinja tadio, ary ireo izay nametraka ny fitokiany tao amin’ny Tompo no hafahana. Tokony ho 121 taona talohan’i Kristy.
Nampianatra ny vahoakan’i Limia i Amôna—Nahalala ny amin’ireo takelaka efatra amby roapolo an’ny Jaredita izy—Afaka mandika ireo takelaka tranainy ny mpahita—Tsy misy talenta lehibe noho ny maha-mpahita. Tokony ho 121 taona talohan’i Kristy.
Ny Rakitsoratr’i Zenifa—Tantaran’ny olony, hatramin’ny fotoana nandaozany ny tanin’i Zarahemlà ka hatramin’ny fotoana nanafahana azy hiala teo an-tanan’ny Lamanita.
Mahafaoka ny toko 9 ka hatramin’ny 22.
Nitarika andiany iray avy tany Zarahemlà i Zenifa mba hizaka ny tany ao Lehia-Nefia—Namela azy ireo handova ny tany ny mpanjaka Lamanita—Nisy ady teo amin’ny Lamanita sy ny vahoakan’i Zenifa. Tokony ho 200–187 taona talohan’i Kristy.
Nodimandry i Lamàna Mpanjaka—Baribariana sy lozabe ny olony ary nino fomban-drazana diso—Nandresy azy i Zenifa sy ny olony. Tokony ho 187–160 taona talohan’i Kristy.
Nanapaka tamin’ny faharatsiana i Noà Mpanjaka—Nanaram-po tao amin’ny fiainana baranahiny niaraka tamin’ny andefimandriny sy ny vaditsindranony izy—Naminany i Abinadia fa ny vahoaka dia havarina ho andevo—Nifofo ny ainy i Noà Mpanjaka. Tokony ho 160–150 taona talohan’i Kristy.
Naiditra am-ponja i Abinadia noho ny faminaniana ny hamongorana ny vahoaka sy ny fahafatesan’i Noà Mpanjaka—Nitanisa ny soratra masina ny mpisorona sandoka ary nihambo ho mitandrina ny lalàn’i Mosesy—Nanomboka nampianatra azy ireo ny Didy Folo i Abinadia. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Narovan’ny herin’ Andriamanitra i Abinadia—Nampianatra ny Didy Folo izy—Tsy amin’ny alalan’ny lalàn’i Mosesy irery no hiavian’ny famonjena—Izy Andriamanitra tenany mihitsy no hanao ny sorompanavotana sy hanavotra ny olony. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Niteny ho an’ny Mesia i Isaia—Naharihary ny fanivaivana sy ny fahorian’ny Mesia—Nanolotra ny fanahiny Izy ho fanatitra noho ny fahotana ary nanao fanalalanana ho an’ny mpandika lalàna—Ampitahao amin’ny Isaia 53. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Ny maha-Ray sy Zanaka an’i Kristy—Izy no hanao fanalalanana sy hitondra ny fandikan-dalàn’ny olony—Izy ireo sy ny mpaminany masina rehetra no taranany—Nanatanteraka ny fitsanganana amin’ny maty Izy—Ny fahazoan’ny ankizy madinika fiainana mandrakizay. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Nanavotra ny olona tamin’ny toetry ny fahalavoana sy fahaverezana Andriamanitra—Ireo izay olon’ny nofo dia nijanona toy ny tsy nisy fanavotana vita—I Kristy no nanatanteraka ny fitsanganana amin’ny maty ho amin’ny fiainana tsisy fiafarany na ho amin’ny fanamelohana tsisy fiafarany. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Nino sy nanoratra ny tenin’i Abinadia i Almà—Niaritra fahafatesana tamin’ny afo i Abinadia—Naminany aretina sy fahafatesana amin’ny afo ho an’ny mpamono azy izy. Tokony ho 148 taona talohan’i Kristy.
Nitory teny mangingina i Almà—Nanazava ny fanekempihavanan’ny batisa izy ary nanao batisa tao amin’ny ranon’i Môrmôna—Nanangana ny Fiangonan’i Kristy izy ary nanendry mpisorona—Namelon-tena ny mpisorona ary nampianatra ny vahoaka—Nankany an-tany foana i Almà sy ny olony mandositra an’i Noà Mpanjaka. Tokony ho 147–145 taona talohan’i Kristy.
Nikatsaka hamono an’i Noà Mpanjaka i Gideôna—Nanani-bohitra ny Lamanita—Niaritra fahafatesana tamin’ny afo i Noà Mpanjaka—Nanapaka toy ny tompomenakely i Limia. Tokony ho 145–121 taona talohan’i Kristy.
Nasian’ny Lamanita ny vahoakan’i Limia ary noreseny—Nifanena tamin’i Amôna ny vahoakan’i Limia ary niova fo—Nitantara tamin’i Amôna ny momba ny takelaky ny Jaredita efatra amby roapolo izy. Tokony ho 122–121 taona talohan’i Kristy.
Nanao tetika ny vahoaka mba handosirana ny fanandevozan’ny Lamanita—Natao ny hahamamo ny Lamanita—Nandositra ny vahoaka, niverina tany Zarahemlà ary nanjary olom-pehezin’i Môzià Mpanjaka. Tokony ho 121–120 taona talohan’i Kristy.
Ny tantaran’i Almà sy ny vahoakan’ny Tompo izay noroahan’ny vahoakan’i Noà Mpanjaka tany an-tany foana.
Mahafaoka ny toko 23 sy 24.
Nandà tsy ho mpanjaka i Almà—Nanompo izy araka ny maha-mpisorona avo azy—Nanafay ny olony ny Tompo, ary lasan’ny Lamanita ny tanin’i Helama—Amiolôna mpitondra ny mpisorona mamohehatr’i Noà Mpanjaka, dia nanapaka amin’ny maha-tompomenakelin’ny mpanjaka Lamanita azy. Tokony ho 145–121 taona talohan’i Kristy.
Nanenjika an’i Almà sy ny olony i Amiolôna—Novonoina ho faty izy raha mivavaka—Nanao izay hanamaivanana ny enta-mavesany ny Tompo—Nanafaka azy tamin’ny fanandevozana Izy, ary niverina tany Zarahemlà izy. Tokony ho 145–120 taona talohan’i Kristy.
Nanjary Nefita ny tamingan’i Mioleka tao Zarahemlà—Nianatra ny momba ny olon’i Almà sy ny an’i Zenifa izy—Nanao batisa an’i Limia sy ny olony rehetra i Almà—Nanome lalana an’i Almà i Môzià hanangana ny fiangonan’ Andriamanitra. Tokony ho 120 taona talohan’i Kristy.
Nandrara ny fanenjehana i Môzià ary nandidy ny hisian’ny fitoviana—Nikatsaka ny handrava ny fiangonana i Almà zanany sy ny zanak’i Môzià efa-dahy—Niseho ny anjely iray ary nandidy azy hampitsahatra ny asa ratsiny—Nanjary moana i Almà—Tsy maintsy ateraka indray ny olombelona rehetra hahazoany ny famonjena—Nilaza vaovao mahafaly i Almà sy ny zanakalahin’i Môzià. Tokony ho 100–92 taona talohan’i Kristy.
Nandeha mba hitory tany amin’ny Lamanita ny zanakalahin’i Môzià—Nandika ny takelaky ny Jaredita i Môzià, tamin’ny fampiasana ny vato roan’ny mpahita. Tokony ho 92 taona talohan’i Kristy.
Namosa-kevitra i Môzià mba hifidianana ny mpitsara ho eo amin’ny toeran’ny mpanjaka—Nitarika ny vahoakany tany amin’ny fahotana ny mpanjaka tsy marina—Nofinidin’ny feon’ny vahoaka i Almà zanany mba ho lohan’ny mpitsara—Izy koa no mpisorona avo teo amin’ny fiangonana—Nodimandry i Almà rainy sy i Môzià. Tokony ho 92–91 taona talohan’i Kristy.